Ukuba ucinga ukwenza ii-AirTag zenziwe ngamagama ahlaselayo, iApple ayizukuvumela | Ndisuka mac
Ukuba ucinga ukwenza ii-AirTags zakho ngamagama ahlaselayo, iApple ayizukuvumela
I-Apple ityhile ii-AirTags ezinqwenelekayo izolo kumsitho wasentwasahlobo. Ezi discs eziza kusebenzisa Fumana itekhnoloji yam ebanzi ebanzi ukuze sikwazi ukufumana ezo zinto sizifunayo nezilahlekileyo. Nokuba sisebenzisa i-Android. Inyani yile yokuba sinokuthi sizenze ngokwezifiso njengoko sifuna. Ngamabinzana okanye ii-emoticons, ii-emojis ezidumileyo. Kodwa ukuba ucinga ukubeka izimvo okanye indibaniselwano ye-emojis ngemfundo encinci ethandabuzekayo, uya kuba nexesha elinzima kuba I-Apple inenkqubo engqongqo yolawulo.
I-Apple AirTag trackers inokurekhodwa ngokwesiko kusetyenziswa okubhaliweyo, amanani kunye ne-emoji, Kodwa abasebenzisi abafuna ukuveza into enomdla ongathandabuzekiyo kuya kufuneka bajonge kwenye indawo, kuba isixhobo esenziwe ngokobuqu kwi-Intanethi ngesixhobo esitsha se-Apple sicaphuka ngokulula kwaye singqongqo kwindlela yaso yokuthintela ezo zimvo.
I-AirTag inkulu ngokwaneleyo ukuba inokubamba ukuya kuthi ga koonobumba abane okanye ukuya kuthi ga kwi-emoji ezintathu. Inokuba yindawo eyaneleyo yomntu onoluvo "lokuhlekisa" kunye nomnqweno wokuqhula ukuze akhulule iingcinga zabo. Nangona kunjalo, njengoko iVerge ibonisa, Apile ibeka imida engqongqo malunga nento onokuyifanekisela kwi-AirTag.
Ukusikelwa umda okufanayo kusebenza kumagama anokucaphukisa abhalwe kwisicatshulwa, nangona abanye abasebenzisi ngokuqinisekileyo beya kufumana iindlela zokudlula kwimida. Eli ayiloxesha lokuqala iApple isika amaphiko malunga noku. Uninzi lwe Izithintelo ezifanayo ze-emoji zikhona kwii-AirPod kunye ne-iPad, umzekelo.
Ngokoluvo lwam, ndicinga ukuba kuhlala kukho izithuba zokuphulukana nemithetho emiselweyo. Iya kuba ngumcimbi wexesha ukubona ii-AirTags nge-emojis okanye izicatshulwa ezibangela ukuhlekisa okanye ukubulela. Kuya kuba mnandi ukubona ezinye zazo. Umcimbi wexesha phantse yonke into.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Ukuba ucinga ukwenza ii-AirTags zakho ngamagama ahlaselayo, iApple ayizukuvumela
Isibane setafile kunye ne-10m ye-LED strip ehambelana neMeross HomeKit